दुःख, सुख र जीवन के हो ? | BodhiTv
गौतम मान सिंह
हिजो के भयो । भोली के हुन्छ । त्यो सोच्नु जीवन होइन । तर आज हामी कुन ठाउँमा, कुन अवस्थामा के सोचेर के गर्दैछौ त्यही जीवन हो । वर्तमान अवस्थामा यदि हामीले सकारात्मक र राम्रो सोच र त्यही अनुसारको आनन्द, खुशी र रमाइलो अनुभव गर्दछौं; चाहे हाम्रो वरिपरि जतिसुकै नराम्रो कुराहरु वा घटना घटोस् । किनकी सत्य त्यही हो कि तत्काल त्यति बेला हाम्रो दिमागले के सोच्छ र हाम्रो शरीरलाई के गर्न लगाउँछ । हो, त्यहि वर्तमान अवस्थामा हामीले गर्ने क्रियाकलाप नै जीवन हो । जस्तै तपाईं- हामीहरुले पनि प्रत्यक्ष धेरै अनुभव गरेको कुराहरु हो यो कि हामीहरु कतिपय हाम्रो मरेका मान्छेहरुको मलामी जान्छौं । (ती मरेका व्यक्ति हाम्रो नजिकका नाता, आफन्त, छरछिमेकी वा साथीभाई हुन्छन्) अनि हेर्नुस् त त्यतिबेला हामीहरु के गर्छौं ? कति रुन्छन्, कति निन्याउरो अनुहार लगाएर बस्छन्, कति लास नजलाई घर फर्किन हतारिन्छन्, कति अलि टाढा बसेर गफ गर्दै हाँसिरहन्छन्, कति विशेष कारण बस रिसाई रहेका हुन्छन् त कति लासलाई छोडेर आफ्नो भोक मेटाउन वरपर लाग्छन् ।
के मृत्यु मानव जीवनमा घट्ने सबै भन्दा ठूलो दुःख (शोक) र घटना होइन र ! तर पनि किन सबै मानव (मानिसहरु) रुँदैनन् त ! किन सबै दुःखी हुँदैनन् त ? किन लासलाई हतार हतार जलाएर फर्किन खोज्दछन् त ? किनकी त्यो हामीहरुको त्यति बेलाको तत्काल सोचको परिणाम (नतिजा) हो । त्यसैले जीवनमा न दुःख छ न सुख छ । छ त केवल तपाई हाम्रो तत्कालिन सोचले गर्ने र गराउने क्रियाकलाप मात्र ।
कतिपय मानिसहरु जीवनको बारेमा सोच्दछन् कि जीवन भनेको सुख हो र जीवन भनेको दुःख हो । सुख भनेको के हो ? सुख केलाई भन्ने ? दुःख के हो ? दुःख केलाई भन्ने ?